प्रहरी चौकीमारहेका महराको बारेमा दशैंको टिकाको दिन यस्तो नमिठो खबर बाहिरियो, के थिए महरा के भए आज ! – Hot Post News
प्रहरी चौकीमारहेका महराको बारेमा दशैंको टिकाको दिन यस्तो नमिठो खबर बाहिरियो, के थिए महरा के भए आज !
काठमाण्डौ । महिलामाथि यौ न दु व्र्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कुष्णबहादुर महराको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । आइतबार पक्राउ परेका महरालाई सिंहदरबारस्थित प्रहरी चौकीमा राखिएको छ । उनलाई सुगर र प्रेसरको समस्या देखिएको हो । पहिलादेखि नै सामान्य विरामी महरा पक्राउ परेपछि थप अप्ठ्यारो महसुस गरेका थिए ।
तर उनी अस्पताल जान मानेका छैनन् । सार्वजनिक स्थानमा जान उनले अप्ठ्यारो मानेका हुन् । त्यसैले उनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नका लागि हिरासत कक्षमा नै अक्सिजन, चिकित्सक र गाडी स्ट्याण्डबाइ राखिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
उनलाई बेलाबेलामा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अक्सिजन दिइएको छ । अस्पताल जान नमाने पनि ठूलै समस्या हुन्छ कि भन्ने डरले प्रहरी अस्पतालको गाडी तैनान अवस्थामा राखिएको छ ।
पक्राउ परेपछि उनालाई भेट्न कोही पनि नेता गएका छैनन् । उनले भेट्न जाने जति सबैसँग भेट पनि गरेका छैनन् । आफूले चाहेको व्यक्तिसँग मात्रै भेट गरेको स्रोतको दावी छ । दसैँको मुखमा राज्यको पाँचौ वरियता क्रममा रहेको सभामुख जस्तो गरिमामय पद गुमाउनु पर्दा यति बेला महरा घोर पछुतो मान्दै प्रहरी चौकीमा दिन कटाइ रहेका छन्। आम नेपाली दसैँको रमझममा रमाइ रहँदा यो वर्षको दसैँ महरा र उनको परिवारका लागि ‘दशा’ बनेर आएको छ।
असोज २ गते संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महरा ‘दसैँ मुड’मा आइसकेका थिए। उनलाई आरोप लगाउने महिलाले आइतबार बेलुका महराले ‘आज मिलेर दसैँ मनाऔँ’ भन्दै र क्सी खान प्रस्ताव गरेको बताएकी छिन्। ‘यो दसैँमा उहाँले दाङ र रोल्पा जाने तयारी गर्नुभएको थियो। तर घटनापछि सबै योजना लथालिंग भएका छन्। कहाँ जाने के गर्ने भन्ने केही सोच्न सकिएको छैन।’ उनी फूलपाती (शनिबार) दाङ जाँदै थिए।
दसैँमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातासँग भेटघाट गर्ने र विकास निर्माणका कामको निरीक्षण गर्ने तयारीमा महरा थिए। स्रोतका अनुसार उनी दसैँ लगत्तै काठमाडौँ फर्किने योजनामा थिए।
तर, अप्रत्यासित घटनाले निवर्तमान सभामुख र उनको परिवार तनावमा छ, दसैँका लागि बनाइएका सबै योजना अलपत्र परेका छन्। यो वर्ष मात्र होइन उनीहरुका लागि आउँदा दसैँहरु पनि एउटा नरमाइलो क्षणको रुपमा रहने भएको छ।
Prevज्ञानेन्द्रको हातबाट टिका थाप्न पुगेका समर्थकले लगाए उसैको निवास अगाडी नाराबाजी,सबिता माताले गरिन डरलाग्दो भाबिश्यवाणी-भिडियो